Kitra – «ligue des champions d’europe»: norombahin’ny Liverpool fanineniny ny amboara - ewa.mg
Kitra – «ligue des champions d’europe»: norombahin’ny Liverpool fanineniny ny amboara
News - Kitra – «ligue des champions d’europe»: norombahin’ny Liverpool fanineniny ny amboara
14 aty aoriana vao niverina teo amin’ny Liverpool indray ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”, taranja baolina kitra. Tsy namelan-dry zalahy, raha tsy azony ny anarana maha tompondakan’i Eoropa, tamin’ity taorian’ny tsy fahombiazany, tamin’ny taon-dasa, ka nandresen’ny Real Madrid, azy ireo teo amin’ny famaranana.
Lavon’ny The Red Liverpool, tamin’ny isa mazava, 2 no ho 0 ny Spurs Tottenham. Baolina tafiditr’i M Salah, teo amin’ny minitra faharoa, tamin’ny alalan’ny “pénalty” sy ny an’i Origi, teo amin’ny minitra faha-87.
Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja, Wanda Metropolitano tao Madrid, ny asabotsy 1 jona lasa teo. Adin’ny samy Anglisy ny lalao, izay ekipa diso mifankahalala tsara. Tamin’ny ankapobeny, nanindry ary nanantombo teo amin’ny fanafihana ny Spurs Tottenham, saingy tsy nety nahita ny masonaraton’ny Liverpool, mihitsy.
Nanao izay ho afany ihany koa i Lucas Mura, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa, fa tsy nisy inoninona. Anisan’ny nanimba ny toe-tsain-dry zalahy, ilay “pénalty”, tonga aloha be. Nidona tamin’ny tanan’i Sissoko, tao anaty faritra tsy azo ivalozana, mantsy ny baolina nodakan’i Mané.
Niezaka hatramin’ny farany ny Spurs, nitadiavana sahala fa voasakan’i Alisson, hatrany ny dakan-dry Son sy ry Kane. Anisan’ny herin’ny Liverpool, ny fahamafisan’ny fiarovantena, notarihin’i Joel Matip sy ry Virgil. Na izany aza, mpilalao nisongadina indrindra, ilay Senegaley, Sadio Mané.
Rehefa nanafika tsy nahomby ny Spurs, nitsimbadika ho baolina maty ho an’ny Liverpool izany, tamin’ny alalan’i Origi, teo amin’ny minitra faha-87. Tsiahivina fa efa nandrombaka izany izy ireo, ny taona 1977, 1978, 1981, 1984, 2005.
L’article Kitra – «ligue des champions d’europe»: norombahin’ny Liverpool fanineniny ny amboara a été récupéré chez Newsmada.
Samy naratra voadonan’ny bajaj ireo ankizy mianadahy nandalo tao amin’ny Bazaribe Toamasina, omaly tolakandro. Voatery noentina notsaboina tany amin’ny hopitaly ilay zazavavikely izay voa mafy tokoa. L’article Lozam-pifamoivoizana est apparu en premier sur AoRaha.
Ifanadiana : Fiara voatafika, tovovavy kely 14 taona voatifitra
Tato anatin’ny iray volana dia nanao tohi-vankana ny fanafihana amin’ny andro atoandro be nanahary amin’ny lalanam-pirenena faha-7 sy ny faha-25. Afak’omaly, fiara iray avy ao Ranomafana Ifanadiana no nosakanan’ny dahalo teo anelanelan’ny Vohiparara sy Ambalakindresy, ka tovovavy kely iray 14 taona no voatifitra teo amin’ny handriny sy teo amin’ny masony havanana. Voavonjy ara-dalana ity zazavavy ity, ka manaraka fitsaboana izy amin’izao, ary tsy ahiana intsony ny ainy, raha ny nambaran’ny dokotera mandray an-tanana ny fitsaboana azy. Noho ny firongatry ny fanafihana fiara ataon’ireo dahalo mpanakan-dalana mitam-basy ao Ambalakindresy, dia mangataka ny hanaovana maika « opération fampandrian-tany » ny mponina sy ireo mpampiasa lalana, satria tamin’ity taona ity fotsiny raha ny tarehi-marika azo, dia efa am-polony ny fanafihana nitranga tamin’io toerana io. Eric ManitrisaL’article Ifanadiana : Fiara voatafika, tovovavy kely 14 taona voatifitra a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fitahirizana ny vakoka: hiofana ireo tompon’andraikitra miisa 26
Manomboka ny 11 jona izao ary mandritra ny tapa-bolana, hiatrika fiofanana ireo tompon’andraikitra miisa 26, miasa amin’ny tranom-bakoka 12 manerana ny Nosy. Eny amin’ny lapan’Andafiavaratra no hanatanterahana izany. Hizara ny fahalalany ny manampahaizana manokana avy amin’ny foibem-pikarohana iraisam-pirenena momba ny fitahirizana sy ny fikolokoloana ny vakoka ara-kolontsaina (ICCROM).Anton’ny fiofanana ny fahavitsian’ny olona manampahaizana amin’ny fitahirizana vakoka eto amintsika. Hiompana amin’ny fomba fiasa iraisam-pirenena, antsoina hoe « RE-ORG », na famerenana ny fandaminana ny tahiry ao amin’ny mozea ny fiofanana. Hampianarina azy ireo koa ny teknika momba ny fampirantiana ireo vakoka.“Rehefa vita ny fiofanana eto, hisy ny fampiharana ny vokatr’izany, any amin’ny mozea misy azy ireo avy. Mialoha ny volana novambra io fampiharana io, satria hiverina hisokatra ho an’ny rehetra, amin’io ny tranom-bakoka ety Andafiavaratra”, hoy ny fanazavan-dRazafiarison Francis, tale jeneralin’ny minisiteran’ny Kolontsaina.Landy R. L’article Fitahirizana ny vakoka: hiofana ireo tompon’andraikitra miisa 26 a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana Toamasina: kandidà 9 amin’ireo 12, nanasonia ny dina
Tontosa, ny alakamisy teo, tetsy amin’ny efitrano malalaky ny lapan’ny faritra Atsinanana ny fifanaovan-tsonia momba ny ” Toky nomena” na ny Dina nokarakarain’ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM) sy ny Ceni foibe ho an’ ireo kandida hilatsaka hofidina depiote rehetra eto Toamasina. 12 mianandahy ireo kandidà ka nanasonia izany ny 9 raha tsy tonga fa nandefa solontena ny roa : ny kandidà Botozaza Pierrot sy Naharimamy Lucien Irmah. Nitsipaka izany kosa ny iray, ny kandidà Rakotomalala Henri na i “Riri be”, tsy hanao sonia. Anisan’ny nampiahiahy ny sasany kosa ny fomba fanaon’ny HCC manoloana ny fitoriana azo raisina nefa tsy manisy lanjany akory izany. Na koa noho ny tsy fahampian’ny porofo. Nanazava ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry fa tsy tahaka ny fifidianana nolalovantsika hatramin ‘izay ity indray mitoraka ity. “Tsy tokony handeferana ny halatra anatin’ny fifidianana fa maha voasazy roa ka hatramin’ny dimy taonaan-tranomaizina sy fandoavana lamandy ary tsy fahazahoana milatsaka hofidina. Manampy izany, tsy afa-mifidy mandritra ny 15 taona”, hoy izy.Sajo L’article Fifidianana Toamasina: kandidà 9 amin’ireo 12, nanasonia ny dina a été récupéré chez Newsmada.
Fifampitifirana :: Olona efatra maty tany Ankavandra
Naharitra ora maro ny fifampitifrana teo amin’ny dahalo sy ny fokonolona niaraka tamin’ny zandary marobe, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, tany Andrafia-Ankaboka any Ankavandra. Telo tamin’ireo fokonolona no voalaza fa namoy ny ainy teo no ho eo. Tsy afaka hanohy ny halatr’omby intsony ihany koa ny iray tamin’ireo dahalo am-polony maro. Tafaverina amin’ny tompony ireo omby miisa efatra amby telopolo amby zato, norobain’ny dahalo. Notafihin’ny dahalo am-polony maro nitondra basy, tany Beambiaty-Antsahalava, any Tsiroanomandidy, tamin’ny faran’ny herinandro. Toerana iray fitobian’ny omby io toerana io ka lasan’ireo dahalo avokoa ny omby miisa roa amby efapolo amby zato tao anatiny. Nisy ny fanenjehana nataon’ireo fokonolona teo amin’ny manodidina ka nifanojo ireo dahalo sy ireo mpanenjika tany Andrafia-Ankaboka, any Ankavandra, ora maro taty aoriana. Na teo aza ireo olona telo namoy ny ainy avy amin’ ireo fokonolona dia nanohitra hatrany ireo zandary manodidina roa amby valopolo isa nampian’ireo Tafika avy amin’ny Bia. Fito tamin’ireo omby no voalaza fa maty teny an-dalana. L’article Fifampitifirana :: Olona efatra maty tany Ankavandra est apparu en premier sur AoRaha.
Ravinala Airports: hofanina ny mpiasa
Nambaran’ny tale jeneralin’ny orinasa Ravinala Airports, i Patrick Collard, fa saika efa tafapetraka avokoa ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana ho an’ny seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato, hisahana ny zotra iraisam-pirenena. Ato anatin’ny enim-bolana, miditra amin’ny fampiofanana ireo olona hampiasa izany izy ireo. Manodidina ny 250 ny mpiasan’ny Ravinala Airports, ary mahatratra 500 hatramin’ny 1 000 ny rafitra samihafa manana andraikitra koa eny amin’ny seranam-piaramanidina, toy ny ao amin’ny ladoany, ny mpitandro filaminana, ny kaompania ana habakabaka, sns. Nomarihiny fa anisan’ny asa vaovao ho hita eny an-toerana ny fitantanana ny fiampitana avy eo amin’ny fiaramanidina mankany amin’ny toeram-pandraisana ny mpandeha (passerelle d’embarquement).Tsiahivina fa havadika hikarakarana ny zotra anatiny sy ny zotram-paritra na rezionaly ny toeram-pandraisana ny mpandeha iraisam-pirenena, misy ankehitriny, ary ho an’ny kaompania tsy miankina eto an-toerana ny zotra anatiny.Njaka A.L’article Ravinala Airports: hofanina ny mpiasa a été récupéré chez Newsmada.